Nepalistudio » लगातार किन गइरहेछ बारम्बार भुइँचालो? के काठमाडौं फेरि अर्को ठूलो भुइँचालो जान सक्ने जोखिममा छ?
लगातार किन गइरहेछ बारम्बार भुइँचालो? के काठमाडौं फेरि अर्को ठूलो भुइँचालो जान सक्ने जोखिममा छ?
यसको सुरूआत माघ ८ गते भयो। त्यस दिन राजधानीको थापाथलीलाई केन्द्र बनाएर ३.३ म्याग्निच्युडको भुइँचालो गएको थियो। एक महिनापछि फागुन ४ गते साँझ ८:३४ बजे चार म्याग्निच्युडको धक्काले काठमाडौंबासीलाई तरंगित बनायो। केन्द्रविन्दु कीर्तिपुर आसपास थियो। त्यसको ठ्याक्कै एक महिनापछि चैत ४ गते बिहान ९ बजेर १ मिनेट जाँदा राजधानीबासीले अर्को हल्का झट्का महशुस गरे। मकवानपुर केन्द्र रहेको यो झट्का ४.१ म्याग्निच्युडको थियो।
यही सिलसिलामा वैशाख ११ गते बुधबारका दुई धक्का सबभन्दा ठूला छन्। बिहान ६ बजेर २९ मिनेटमा ५.२ र ६ बजेर ४० मिनेटमा ४.३ म्याग्निच्यूडको भुइँचालो रेकर्ड गरिएको राष्ट्रिय भूकम्प मापन केन्द्रले जनाएको छ। दुवैको केन्द्रविन्दु धादिङको नौबिसे हो।
भूगर्भविद्का अनुसार ठूलो धक्का आउँदा चुरे फेदमा जमिन चिरा परेर शक्ति निष्कासन हुनुपर्छ। यसको तरंग भने काठमाडौं हुँदै दोलखासम्म पुग्यो, तर चुरे फेदको जमिन चिरा पार्न सकेन। त्यो बेला जमिन चिरा परेको भए सम्भवतः गोरखा भुइँचालोको असर पूरै निख्रिन्थ्यो। हामीले यति लामो समय झट्का खाइरहनुपर्ने थिएन। खानी तथा भूगर्भ विभागका वैज्ञानिक यसको पुष्टि गर्छन्।
दक्षिण सरेर चुरे फेदसम्मै पुगेको भए अझै भयावह भुइँचालो जान सक्थ्यो। बीचमै अड्कियो, ठूलो जनधन क्षति टर्यो। भविष्यलाई खतराको घन्टी बनेर भने झुन्डिएकै छ। अहिले काठमाडौंमा लगातार महशुस गरिएको धक्का त्यही खतराको घन्टी हो। जिपिएसबाट हेर्दा अहिले पनि त्यो शक्ति जस्ताको तस्तै छ। दक्षिण सरेको छैन। त्यो कहिले निष्कासन हुन्छ र भुइँचालोको झट्का कहिले बन्द हुन्छ यसै भन्न सकिन्न।
पहिलो, अड्किएको चिरा विस्तारै फुक्दै जानेछ र सानो–सानो भुइँचालोबाट शक्ति ‘रिलिज’ हुनेछ। काठमाडौं र वरपर क्षेत्रमा केन्द्रविन्दु बनाएर जाने स–साना भुइँचालाले यहाँ गाँठो परेको चिरा उधार्दै चुरे फेदसम्म पुर्याइदिन सक्छ। यसो भइदिए साना म्याग्निच्युडका भुइँचाला लामो समय गइरहनेछन्। पछिल्लो चार महिनादेखिका धक्का त्यसैको निरन्तरता हुनसक्छ। यही गतिमा शक्ति निख्रिन धेरै वर्ष लाग्न सक्छ, तर कम जोखिमपूर्ण हुन्छ।
दोस्रो, वैशाख १२ को जस्तै अर्को धक्का आएर गाँठो परेको चिरा एकैचोटि चुरे फेदमा पुर्याइदिनसक्छ। र, भएभरको शक्ति एकैचोटि ‘रिलिज’ हुनसक्छ। जिपिएसबाट प्राप्त तथ्यांकअनुसार काठमाडौंमुनि अड्किएको चिरालाई चुरे फेदसम्म पुग्न लगभग ७ म्याग्निच्युडकै धक्काको खाँचो पर्छ। यसको अर्थ, त्यो बराबरको शक्ति भू–सतहमुनि जम्मा भएर बसेको छ भन्ने हो।
यति ठूलो शक्ति एकैचोटि बाहिर आउनु जोखिमपूर्ण हुनेछ। बेलायती वैज्ञानिक जन इलियटले आफ्नो शोधमा यही अवस्था खुलाउँदै काठमाडौंमा ‘अर्को ठूलो भुइँचालो जोखिम’ देखाएका हुन्। उनले भनेजस्तो एकैचोटि ठूलो भुइँचालो जान्छ भन्ने ठोस आधार केही छैन। बरु नेपालको भुइँचालो इतिहासले यसरी जम्मा भएको शक्ति स–साना धक्काबाट लामो समय लगाएर ‘रिलिज’ हुने सम्भावना बढी देखाउने भूगर्भविद् बताउँछन्।
तेस्रो, काठमाडौंमुनि अड्किएको शक्ति न एकै धक्कामा घिटिक्क बाहिर आउनसक्छ न त लामो समय लगाएर विस्तारै फुक्दै जानेछ। बरु पिप भरिएको पिलोजस्तो ५०–६० किलोमिटर तलसम्म गुजुल्टिँदै बस्छ र केही समयपछि बाहिर आउँछ। जमिनको निकै गहिराइसम्म गुजुल्टिएको शक्ति बाहिर आउँदा त्यसले ल्याउने कम्पनको मात्रा कम हुन्छ। २०४५ को भुइँचालो यसैगरी निकै तलबाट आएकाले कम क्षति भएको थियो।